हामीलाई कहिल्यै एक्लो हुन नदिनेहरु – Chitwan Post
यदि शक्यते नासौ ।
किन्तु स सर्वत्र कर्तव्यः ।।
(या त ममत्वलाई सम्पूर्णरुपमा छोडौँ, छोड्न सकिँदैन भने सबैतिर ममत्वको भाव राखौँ ।
व्यक्ति एक्लो जन्मन्छ । जन्मँदा एउटा नाङ्गो शरीरबाहेक उसले केही पनि लिएर आएको हुँदैन, तर पनि ऊ एक्लो हुँदैन । मानिसको मात्रै होइन पशुचौपाया, कीराफट्याङ्ग्रा, चराचुरूङ्गी सबै एक्लै र नाङ्गै जन्मन्छन्, तर जन्मनासाथ उसको स्याहार र हेरचाहका लागि सम्पूर्ण तयारी भएको हुन्छ । जसले जन्मायो उसले खानपान, रेखदेख र हेरविचारको जिम्मा लिएर ‘शिशुलाई तिमी एक्ला छैनौँ, हामी साथमा छौँ’ भन्ने अनुभूति उसकी आमा, उसका बाबु, साथी र समाजका अन्य सदस्यसमेतले दिलाएका हुन्छन् ।
जन्मिएपछि व्यक्ति कहिल्यै एक्लो हुँदैन, यद्यपि यदाकदा उसले आफूलाई एक्लो भएको महसुस गर्छ । बच्चा जन्मने भनेको पनि बाबुआमाको चाहनामा हो । यदि कुनै पनि बाबुआमाले नचाहने हो भने बच्चा जन्मन पनि सक्दैन । बालबच्चा नहुँदा आफूहरु पूर्ण नभएको, जीवन नै निरस भएको महसुस हुने भएकाले नै बाबुआमाले सायद बच्चाबच्चीको चाहना राख्दछन् र तिनलाई जन्माउँछन् ।
मानिस कहिल्यै पनि एक्लो बाँच्न चाहँदैन । कहिलेकाहीँ घर छोडेर टाढा जाँदा वा एक्लै बस्दा आनन्द आउँछ कि भन्ने पनि लाग्छ । तर, त्यो भ्रममात्रै हो । घर छोडेर वा परिवारका सदस्यदेखि टाढा गए पनि हामी वनजङ्गलमा गएर त बाँच्न सक्दैनौँ ! घर छोडौँला, परिवार छोडौँला वा मन नपरेको मानिसभन्दा पर होऊँला, तर निर्जन ठाउँमा होइन, कतै न कतै मानिस भएकै ठाउँमा हुन्छौँ, परिवार भएकै ठाउँमा हुन्छौँ र घरसमाजमै हुन्छौँ । जहाँ गए पनि जाने मानिस भएकै ठाउँमा हो, समूहमा नै हो ।
जहाँ हामी बाँचेका छौँ त्यहाँ कोही पनि पराई छैन । चिनजान छैन भने पनि भइहाल्छ । कोही पनि सुरूमै परिचित हुँदैन, हुँदै जाने हो । हामी जन्मनुपूर्व न हामीले हाम्रा आमाबाबुलाई चिनेका थियौँ, न दाजुभाइलाई चिनेका थियौँ, न त साथीसँगीलाई नै चिनेका थियौँ । सबै हामी आएपछि भएका हुन् । जन्मिएपछि नै हामीले बनाएका हौँ, आजसम्म हामीले चिनेका मान्छे, सहयोगी र तमाम इष्टमित्रहरु ।
कसैलाई पनि पराई किन मान्नुहुँदैन भने सबै आफ्ना हुन सक्ने सम्भावना छ, सबैसित परिचय गर्न सकिने सम्भावना छ । आजसम्म हामीले कमाएका मानिस र बनाएका सम्बन्धहरु पनि सबै त्यसरी नै सम्भव भएका हुन् ।
मानिसलाई समाज किन चाहिन्छ ? आफन्त, दाजुभाइ, घरपरिवार, इष्टमित्र र छरछिमेक किन चाहिन्छ ? किनभने जन्मजात ऊ एक्लो छ, एकप्रकारले अनाथ र असहाय छ । संसारका सम्बन्धहरुलाई एकछिन निकालिदिने हो भने हामी अनाथ नै त हौँ नि ! अन्ततः हामी एक्लो हुने भएकाले नै समूह, सहयोगी र साथी चाहिने हो । हाम्रो समाज हाम्रो त्यही आवश्यकताको परिणाम हो ।
मानिसलाई मात्रै समाज चाहिने भन्ने हुँदैन । पशुचौपायामा पनि यही नियम लागू हुन्छ । पशुपक्षी पनि यस्तै गर्दछन् । चाहे मृग देख्नुस्, चाहे बाँदर देख्नुस्, सबै समूहमै बस्छन्, समूहमै हिँड्छन् । आकाशमा हेर्ने हो भने पनि मिलेर उँडेका चराहरुको समूह र हुल देख्न सकिन्छ ।
गाईवस्तु, हाँसकुखुरा यी सबै समूहमै चर्छन्, हिँड्छन्, रमाउँछन् । पशुपक्षी र जीवजनावरलाई पनि समूह चाहिँदोरहेछ, समाज चाहिँदोरहेछ किनकि ती पनि निरीह छन्, एक्ला छन्, कमजोर छन्, आफैँमा।
यहाँ सबैले सबैलाई स्नेह गर्नुपर्ने अवस्था छ, किनकि एक्लाएक्लै सबै कमजोर छन्, सबै निरीह छन् र विचरा छन् । हामी विचराहरु, त्यसैले समूहविना बलिया हुन सक्दैनौँ । समाजले नै हामीलाई मनोवैज्ञानिकरुपमा बलियो बनाएको हुन्छ । हाम्रा साथीहरुले नै हामीलाई बलिया बनाएका हु्न्छन् ।
हामीसित आज जुन उत्साह छ, हिम्मत छ, साहस र जोसजाँगर छ त्यो सबै हाम्रै मित्रहरुका कारण सम्भव भएको हो । हामीलाई प्रेम र स्नेह गर्ने मानिस यदि हाम्रा वरपर हुँदैनथे भने हामीले कहाँबाट पाउनु यो उत्साह र जोस ? कहाँबाट पाउनु आकाश हुने सपना ! अनि कहाँबाट पाउनु आफू बाँचेर अरुलाई पनि बचाउने प्रेरणा !
हाम्रा मान्छेहरु नहुने हो भने हाम्रो जीवनको पनि कुनै अर्थ हुँदैन । हाम्रो घर छ, समाज छ, देश छ, संस्कृति छ, धर्म छ, पहिचान छ, र पो त हामी पनि छौँ । नत्र कसका लागि बाँच्ने ? हामीभित्रको मीठो गीत र सङ्गीत कसका अगाडि गुनगुनाउने ? आफूभित्रको कविता कसलाई सुनाउने अनि चित्र कसलाई देखाउने ? हेर्ने मान्छेहरु छन् र पो त हामीले चित्र कोर्छौं । सुन्ने मान्छे छन् र पो त हामीले गीत र कविताहरु लेख्छौँ । हाम्रो हौसलाका लागि ताली बजाउने मानिसहरु छन् र त हामी केही गर्ने साहस र हिम्मत गर्दछौँ ।
हामी एक्लै केही होइनौँ, हुँदै होइनौँ । जे छौँ, जन्मिएपछि हामीले पाएको संस्कार, बनाएका मानिस, बाँचेको दर्शन, गरेको अभ्यास र भोगेको अनुभूतिका कारण छौँ । जे गर्ने अठोट गरेका छौँ त्यो पनि यहीँका हामीलाई स्नेह गर्नेहरुकै कारण गरेका छौँ ।
कल्पना गर्नुस्, हामी एक्लो हुँदाको अवस्था । हामी ठूलो कलाकार भयौँ, कवि वा लेखक भयौँ, हामीले लेखेका सुन्दर लेखरचना र कविता छन्, अभिनय गर्न सक्ने अद्भुत कला छ, तर सुन्ने कोही छैनन्, हेर्ने कोही छैनन्, त्यतिबेला कस्तो होला ? तपाईं मात्रै हुनुहुन्छ, तपाईंको मीठो स्वर छ, सुनाउने चाहना पनि छ, योग्यता पनि छ, तर मानिस कोही छैनन्, कसलाई सुनाउनुहुन्छ ? तपाईं त हुनुहुन्छ, तर अरु कोही छैनन्, कसका अगाडि प्रस्तुत हुनुहुन्छ ?
हाम्रो प्रस्तुति यसैले हाम्रालागि होइन, हाम्रो प्रतिभा पनि हाम्रालागि होइन, हामी वरपर रहेका मान्छेका लागि हो । हाम्रो छेउछाउ र अगाडिपछाडिका मानिसका कारण नै हाम्रो जीवन धन्य भएको छ भन्ने सत्यलाई हामीले कहिल्यै बिर्सनुहुँदैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि मानिस किन वरपर रहेका मानिससित झिँजो मान्छ ? किन टाढा हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छ ? अरुलाई किन दिने भनेर किन ठान्छ ? यी प्रश्नहरुमाथि विचार गर्नैपर्छ । जसले हाम्रो अस्तित्वलाई थप समुज्ज्वल र सुप्रकाशित तुल्याएको छ त्यस्तो व्यक्तिसित झर्कने व्यक्तिको कहिल्यै कल्याण हुँदैन ।
हामीलाई अस्तित्वशील तुल्याउने काम हाम्रा धेरै मान्छेले गरेका छन् । त्यो कामको सुरूआत हाम्रै घरबाट भएको हुन्छ । हाम्री आमा हामीलाई सबैभन्दा धेरै स्नेह गर्ने पात्र हुन् । उनले कहिल्यै हामीलाई ए्रक्लो हुन दिइनन् । कुनै पनि क्षण खतरामा राखिनन् । उनको सारा प्रयास नै कसरी हामीलाई बलियो, राम्रो, स्वस्थ र सार्थक बनाउने भन्नेतिर रह्यो । सानोमा हामीले जानेका सारा कुरा आमालाई नै भन्थ्यौँ, सुनाउँथ्यौँ । आमाले ध्यान दिएर सुन्थिन् । हिजो उनले हाम्रा कुरा नसुनेका भए आज हामीले पनि अरुलाई केही सुनाउन सक्दैनथ्यौँ ।
आमापछि हामीलाई एक्लो हुन नदिने हाम्रा बा हुन् । उनले हाम्रो भलाइ, कल्याण र उन्नतिका लागि दिनरात चिन्ता र चिन्तन गरे ।
हामीलाई कुनै पनि कुराको अभाव हुन दिएनन् । हामीभित्रको प्रतिभा प्रकाशनका लागि उनले गरेको मिहिनेत अद्वितीय छ । हामीभित्रको आत्मविश्वास, साहस र आडभरोसा हामीले हाम्रै बाबाबाट सिकेका हौँ ।
बाबाआमापछि हाम्रा दाजुभाइ र दिदीबहिनीले हामीलाई एक्लो हुनबाट जोगाए । कहिलेकाहीँ आपसमा लड्यौँ, रोयौँ, हाँस्यौँ, हँसायौँ, सबै ग¥यौँ । उनीहरुबाट खोस्यौँ पनि र खोसायौँ पनि । बाँडीचुँडी खान र खुवाउन पनि जान्यौँ । बाबाआमासित कहिलेकाहीँ रिसाउँदा मनको बह कहाँ पोखौँ हुन्थ्यो, त्यतिबेला दाइदिदी, भाइबहिनीलाई सुनाएर हलुका हुन्थ्यौँ । साथीहरुसित झगडा हुँदा हामीलाई जोगाउने काम हाम्रै दाइदिदीले गरेका हुन् ।
हाम्रा साथीहरुले पनि हामीलाई कहिल्यै एक्लो हुन दिएनन् । बाबाआमाबाट छुट्टिएर पढ्न जाँदा होस् वा खेल्न जाँदा होस्, हाम्रा साथीहरुले साथ दिएर नै हामीलाई साहसी बनाएका हुन्छन् । उनीहरु नभएका भए हामीले कसलाई सुनाउँथ्यौँ होला मनका रहर, इच्छा र चाहनाहरु ? उनीहरु नभएका भए कसका लागि खेल्थ्यौँ, कसका कारण दौडन्थ्यौँ र कसका कारण रमाउँथ्यौँ होला ? साथीहरुकै कारण हामी दौडन, उफ्रन, पौडन, खेल्न, रमाउन, खुसी हुन सिक्यौँ । आजको हाम्रो प्रसन्नता उनै साथीहरुका कारण सम्भव भएको हो ।
हाम्रा छिमेकीहरुले पनि हामीलाई कहिल्यै एक्लो हुन दिएनन् । कहिलेकाहीँ घरमा बाबाआमा हुनुहुन्नथ्यो । साना थियौँ । पकाउन पनि आउँदैनथ्यो । छिमेकी अन्टीले बोलाएर खुवाउनुुहुन्थ्यो । एक्लो हुँदा लगेर सुताउनुहुन्थ्यो । छिमेकी अङ्कलका छोराछोरी बोलाएर सुत्थ्यौँ, ढुक्कले निदाउँथ्यौँ । खेल्दा तिनै साथीहरुसित खेलिन्थ्यो । चौपट्टै आनन्द आउँथ्यो । ऐँचोपैँचोमा सधैँ उनीहरुको साथ रहन्थ्यो ।
त्यसपछि ठूला हुँदै गयौँ । धेरै साथी छुटे, धेरै साथी जुटे । यो जुट्ने र छुट्ने सिलसिला आजसम्म पनि जारी छ, तर हामी एक्ला छैनौँ । जहाँ हामी जान्छौँ, हाम्रो एक्लोपन दूर गर्ने कोही न कोही भेट भइहाल्छ ।
हामी पत्रकार, शिक्षक, लेखक, राजनेता, कर्मचारी, मजदुर चाहे जो होऊँ, हामी कोही नभएको निर्जन ठाउँमा गएर आफ्नो काम गर्न सक्दैनौँ । जे गरे पनि वा जसो गरे पनि मानिसकै बीचमा गरेका छौँ, समाज र समुदायकै बीचमा गरेका छौँ । यसको अर्थ, हामीसित चाहे जो ठोकिन आओस्, उसले हामीलाई नै साथ दिने काम गरेको छ, उसकै कारण हामी रमाएका छौँ, अस्तित्वमा आएका छौँ ।
माथिका अनेक सन्दर्भहरुबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हामीलाई हाम्रो एक्लोपन, कमजोरी र अनाथभावबाट मुक्त गर्ने हाम्रै वरपरका मान्छे हुन्, मानिसको समुदाय हो, हाम्रा आफन्त र इष्टमित्र हुन् । यदि वरपरका मान्छे सबैले हामीलाई नै अस्तित्वशाली, जीवन्त र गतिशील तुल्याएका छन् भने हामीले पनि उनीहरुको अस्त्विलाई उत्तिकै गतिशील तुल्याउनुपर्छ कि पर्दैन ? यो निकै विचारणीय विषय हो ।
एकछिन आजको कुरा गरौँ । व्यक्ति लगभग निराशजस्तै छ । लडाइँमा हारेको सिपाहीजस्तै शिर निहुराएर बसेको जस्तो ओजहीन र तेजहीन लाग्दछ । घरमा सबै छन्, तर उसले कसैलाई देख्दैन । समाजमा यति धेरै मान्छे छन्, तर उसलाई मान्छे छन् जस्तो नै लाग्दैन ।
देश छ, तर देश जस्तो मान्दैन र देशको खोजीमा विदेशिन्छ । नितान्त एक्लो, निराश र कुण्ठायुक्त प्रतिबिम्ब लिएर आजको अधिकांश मानिस बाँचेको छ ।
यस्तो किन भयो ? यसको मूल कारण भनेको ‘आफूमात्रै बाँच्ने’ चाहना नै हो । हामीले यतिधेरै कुरा थाहा पायौँ । हाम्रा लागि कति मानिसले दुःख पाएका रहेछन्, कसरी ती मानिसले हाम्रो उपस्थितिलाई गौरवान्वित तुल्याएका रहेछन् र कसरी उनीहरु हाम्रा लागि बाँचेका रहेछन् भन्ने पनि थाहा पायौँ । तर, हामीले सबै बिर्सियौँ । यति धेरै मानिसले हामीलाई अस्तित्वशील बनाएका छन्, तर हामी उनीहरुका लागि बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच्दा तर्सिन्छौँ । जब व्यक्ति अरुका लागि बाँच्नुपर्दा आत्तिन्छ, तर्सिन्छ र अनिच्छा व्यक्त गर्दछ, तब मुन्टो निहुराएर बाँच्न बाध्य हुन्छ । शिर ठाडो पनि कसरी होस् र ! शिर ठाडो त उसको हुन्छ, जसले आफू बाँचेर अरुलाई पनि बचाउने सङ्कल्प गर्छ ।
खु्सी सधैँ एकान्तमा मात्रै पाइन्छ भन्ने कुरा गलत हो । जसरी हाम्रो खुसीमा अरु धेरै मानिसको हात हुन्छ, उनीहरुको खुसीमा पनि हाम्रो हात हुन्छ । हामीले जानेको खुसी, आनन्द र प्रसन्नता पनि यही संसारको सापेक्षमा निर्धारित भएको हुन्छ । जिउँदाका जन्ती, मर्दाका मलामी भन्ने उखानले पनि आनन्द सामूहिकताको प्रतिफल हो भन्ने बताउँछ ।
संसारका कोही पनि अप्रिय छैनन्, सबै प्रिय छन् । यसैले, निश्चित मानिसलाई मात्रै प्रेम गर्नुपर्छ, मेरा हुन् भन्ने ठान्नुपर्छ भन्नु सत्य होइन । अप्यय्य दीक्षितले यही कुरा बोलेका छन् । उनका अनुसार संसारप्रतिको ममता, अनुरागलाई पूर्णतः छोडौँ, होइन भने सबैतिर ममता राखौँ ।
दुवैको अर्थ लगभग उस्तै हो । या संसारका सबैलाई प्रेम गर्ने, या कसैलाई पनि प्रेम नगर्ने । कसैलाई पनि माया नगर्ने भन्नुको अर्थ सबैलाई समान मान्ने भन्नु हो । सबैलाई माया गर्नुको अर्थ पनि कसैलाई धेरै, कसैलाई थोरै भन्ने होइन । सबैलाई उस्तै ठान्नु हो । हामीले पनि हाम्रो वरपरका सबैलाई समान ठान्नुपर्दछ, सबैलाई आफना ठान्नुपर्दछ ।
यदि सबैप्रति समान हुन सकियो भने हामी कहिल्यै पनि एक्लो हुनुपर्दैन । जब हामी सबैप्रति एउटै भाव, एउटै काम र उस्तै सहयोग गर्दछौँ, तब सबैले हामीप्रति पनि उस्तै भाव राख्दछन् । हामी जसका लागि बाँच्छौँ, ती पनि त हाम्रा लागि बाँच्दछन् नि !
निश्चय पनि लामो साथ, सम्पर्क, बसउठ र अनुरागका कारण घरपरिवार, छरछिमेकका मानिसहरुप्रति अलि बढी स्नेह प्रकट हुन पुग्छ । त्यसलाई त्यतिधेरै अस्वाभाविक मान्न त नसकिएला, तर त्यही अतिस्नेहकै कारण अधिक दुःख र पीडाको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै स्नेह गरेकाले छोडेर जाने, बाँकीबाट कुनै पनि स्नेह नपाउने अवस्था झन् घातक हुन्छ ।
सबैप्रति मेरो भन्ने भाव राख्दा अथवा कसैलाई पनि मेरा हुन् भन्ने भाव नराख्दा सबैबाट हाम्रो आशा र अपेक्षा पनि उस्तै हुन्छ । आज हामीले दुई–चार जनाप्रति मात्र मेरा हुन् भन्ने ठान्दा बाँकी सबै पराई हुन पुगेका छन् । ती दुई–चार जना त दुई–चार दिनका मात्रै भए । जहिले पनि जान सक्छन् । उनीहरु नहुँदा त हामी साँच्चै नै टुहुरा हुने भयौँ, किनकि हामीले अरुलाई आफ्ना ठानेनौँ ।
यदि सबैप्रति समान स्नेह राखेका भए अथवा यो जगत्, जीव, मनुष्य र सम्पूर्ण अस्तित्व मेरो हो र म यसकै हो भन्ने ठानेका भए त त्यति सारो दुःख त हुँदैन नि, किनकि यी सबैले त एकैपटक छोडेर जाँदैनन् । मानिसको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ भने यदि तपाई्रंले कसैलाई धेरै, कसैलाई थोरै, कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्नुहुन्छ भने पाखा गरिएकाले कहिल्यै पनि तपाईंलाई साथ दिँदैन र तपाईं स्वयम्ले पनि उसबाट आशा गर्नुहुन्न ।
हामी मनुष्य । हामीले हृदयलाई फराकिलो र विशाल बनाउनुपर्दछ । या त सबैलाई आफ्नो ठानौँ, या कसैलाई पनि आफ्नो नठानौँ । अर्थात्, सबैप्रति समान व्यवहार, अनुराग र भावका साथ व्यवहार गरौँ । यसले हामीलाई दुःखी, निराश र एक्लो हुनबाट रोक्छ ।
अर्को कुरा, एक्लो भए आनन्दित भइन्छ भन्ने जुन भ्रम आज व्याप्त छ, यसले कहिल्यै शान्ति दिँदैन । आफूमात्रै बाँचौँ भन्ने भावका कारण व्यक्ति एकलकाँटे हँुदै गएको हो । कविताको कार्यक्रममा गयो, एउटा कविले आप्नो कविता सुनाउँछ र टाप कस्छ, अर्काको सुन्दैन । गीत, भाषण, अन्य प्रस्तुतिमा पनि एउटाले आप्नो सुनाउँछ, भन्ने कुरा भन्छ तर अर्काको सुन्ने हिम्मत राख्दैन, भागिहाल्छ । आप्mनो चाहिँ सारा स्वार्थ पूरा गर्ने, तर अर्काको स्वार्थलाई भने अस्वीकार गर्ने । यही प्रवृत्तिले व्यक्ति एक्लिएको हो ।
तपाईंलाई मात्रै मह¤व दिनुपर्छ भन्ने के छ ? तपाईंलाई मात्रै सुन्नुपर्ने, तपाईंलाई मात्रै दुःख हुने, तपाईंलाई मात्रै अप्ठ्यारो हुने, तपाईं मात्रै जान्ने, तपाईं मात्रै बुझ्ने ? अरु सबै गोबर गणेश ? तपाईंको मात्रै बोली मीठो, अरुको नमीठो ? तपाईंको कुरामात्रै कुरा, अरुको कुरै होइन ? तपाईंको समयमात्रै समय, अरुको समय समय होइन ? तपाईंमात्रै भगवान्, अरु सबै भक्त ? तपाईंमात्रै हिरो अरु सबै जिरो ? तपाईंमात्रै केन्द्रीय, अरु सबै परिधीय ? आजको समस्या भनेको व्यक्तिले आफूलाई नै मात्रै सर्वस्व ठान्नु हो ।
अरु छन् र हामी छौँ । घर छ, परिवार छ, समाज छ, राष्ट्र छ, आफन्त छन् र पो त हामी छौँ नि हजुर ! धेरैलाई एउटाको भन्दा एउटालाई धेरैको आवश्यकता पर्छ । समाजलाई व्यक्तिको भन्दा बढी व्यक्तिलाई समाजको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरामा कहिल्यै पनि आँखा चिम्लिनुहुँदैन ।
तसर्थ आउनुस्, समाजका लागि पनि सोचौँ । संसार सुन्दर फूलबारी हो । सबै मिलेर नै संसार बन्ने हो । हामी पनि त्यो सुन्दर फूलबारीका एउटा फूल हौँ । सबै फूल मरेर एउटामात्रै बाँच्नुको अर्थ हुँदैन । बगैँचाको हरेक फूल अन्य फूलका कारणले मह¤वपूर्ण भएको हो । हामी पनि हाम्रा मान्छेहरुका कारण हामी भएका हौँ । हामी पनि हाम्रा मान्छेका लागि प्रेरक बनौँ । एक्लो जीवन त सधैँ निरस हुन्छ । सँगै बाँचौँ, सगैँ मरौँ । यही नै हाम्रा पूर्वजहरुले हाम्रा लागि कोरेको लक्ष्मणरेखा हो । हामीलाई कहिल्यै एक्लो हुन, एक्लो रहन नदिने यति धेरै मानिसका बीचमा रहेर पनि हामी यदि फूललाई एक्लो भएको महसुस गर्दछौँ भने कमजोरी बाहिर होइन, कमजोरी हामीभित्रै छ भनेर बुझ्नुपर्दछ । मनुष्य सभ्यता सधैँ सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा अघि बढेको हुन्छ ।
रत्ननगर नगरपालिकाले रोजगार मेला गर्ने